गाई पालन कसरी गर्ने ? – Lokpati.com
केपी शर्मा ओली नेकपा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस अमेरिका नेपाल प्रहरी अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड राशिफल पक्राउ सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु चितवन
काठमाडौं। नेपाली युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशतिर दौडिरहेका छन्। आफ्नो भूमिमा उनीहरू पसिना बगाउन चाहन्नन्। नेपाल एक उर्वर भूमि भएको देश हो। त्यसैले त कृषि प्रधान देशको रूपमा परिचित छ।
आधुनिक तौर र तरिकाबाट यस भूमिलाई प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा नेपाली युवाहरूले विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ। किनभन्दा कृषि क्षेत्र रोजगारीका लागि मुख्य ठूलो क्षेत्र हो। परम्परागत खेती प्रणालीमा परिवर्तन गरी आधुनिक तथा व्यावसायिक प्रणाली अपनाउन सके कृषि क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय केही युवाहरूले कृषि व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। उनीहरू अहिले समाजमा प्रेरणाका पात्र समेत बन्ने गरेका छन्। त्यस्ता युवाहरूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। यसले समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
कृषि क्षेत्र मध्येको एक हो गाघ पालन। नेपालमा पछिल्लो समयमा गाई पालन व्यावसायिक रूपमा फैलिँदै गएको छ। नेपालमा परम्परागत जातका गाईदेखि जर्सी गाईको व्यावसायिक रूपमा पालन सुरु भएको छ। योसँगै दूध उत्पादनको क्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ। त्यस कारण हामीले गाई पालनका लागि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। तपाइलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक गाई पालनको लागि यो जानकारी सहयोगी बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।
नेपालमा नौ किसिमका गाईहरू पाइन्छन्। अछामी गाई, तराई गाई, पहाडी गाई, याक, नाक र चौँरी, लुलु गाई, होलिस्टेन फ्रिजन, ब्रोन स्विस, शाही वाल र जर्सी गाई नेपालमा पाइन्छन्। यी मध्ये जर्सी, होलिस्टेन, ब्रोन स्विस र शाही वाल प्रजातिका गाईहरू पछिल्लो समय बढी प्रचलनमा छन्।
गाई फार्म कस्तो बनाउने ?
गोठ बनाउँदा ओभानो र तुलनात्मक रूपले वरपरभन्दा केही अग्लो र सुरक्षित ठाउँमा बनाउनुपर्छ। त्यसमा यातायात, बिजुली, पानी प्राविधिक सेवा/सुविधा, औषधि, दाना, आदि उपलब्ध भएको नभएको निश्चित गर्नुपर्छ। साथै गाईलाई बेलाबेला बाहिर लैजानुपर्ने भएकाले घाँस चर्न वा लगाउन सकिने ठाउँमा पाल्नुपर्छ। साथै मल मूत्र सजिलै बाहिर लैजान नजिक हुने ठाउँ हुनुपर्छ। पशुको उचाइ, मोटाइ, प्रजाति, तौल आदि किसिमका आधारमा गोठ बनाउनुपर्छ।
बस्ने ठाउँ जमिनबाट ५० से.मि. माथि उठेको र चौडाइ ७ मी तथा लम्बाइ आवश्यकता अनुसारको बनाउनुपर्छ। बस्ने ठाउँ अगाडिदेखि पछाडिसम्म १: १०० को अनुपातमा भिरालो हुनुपर्छ। बस्ने ठाउँ ओभानो र खाल्टाखुल्टी नभएको हुनुपर्छ।
बस्ने ठाउँमा घाम वा प्रकाश छिर्ने बनाउनुपर्छ। घाँसपात दिने डुँडको व्यवस्था हुनुपर्छ। गोठ बनाउँदा मूत्र बगेर जाने नालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चिसो ठाउँमा ताजा हावा खेल्ने झ्याल तथा अन्यमा बिना पर्खालको बनाउन सकिन्छ गोबर (मल) थुपार्ने ठाउँ पशु बस्ने ठाउँभन्दा १० मिटर जति टाढा हुनुपर्छ।
गाई पालनलाई व्यावसायिक रूपमा लैजान नेपाल सरकारले निश्चित सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ। पहाडमा फर्मका रूपमा मान्यता पाउन कम्तीमा पाँच वटा गाई पाल्नुपर्छ भने तराईमा १० वटा अनिवार्य रूपमा पाल्नुपर्छ। नेपालमा मुख्यतया पालिने होलिस्टेन गाईलाई १ लाखदेखि १ लाख २० रुपैयाँसम्म पर्छ।
त्यसै गरी, एउटा जर्सी गाईलाई ८० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। होलिस्टेन र जर्सी गाईबाट क्रस गराएको गाईलाई भने १ लाख रुपैयाँभन्दा महँगो पर्छ। त्यसैले तपाईँले कुन प्रजातिको कति वटा गाई पाल्नुहुन्छ, त्यो आधारमा तपाईँको खर्च लाग्छ।
गाईको दाना वा आहारले प्रत्यक्ष रूपमा यसको स्वास्थ्य र यसले उत्पादन गर्ने दूधमा पर्न जान्छ। यो कारणले पनि गाईलाई खुवाउने दाना सन्तुलित र पोषणयुक्त हुन जरुरी छ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज तथा पानी जस्ता पौष्टिक तत्त्वयुक्त सन्तुलित मात्रामा दिनुपर्छ।
प्रतिकेजि दानामा २६०० किलो क्यालोरी शक्ति तथा १४ देखि १६ प्रतिशत प्रोटिन तत्त्व खुवाउने, दाना, पराल, नल, मकैको ढोड भन्दा हरियो घाँस पर्याप्त मात्रामा गाईलाई दिनुपर्छ।
खोरेत, भ्यागुते, चरचरे, पटके, थुनीलो, मिल्क फिबर जस्ता रोगहरू गाईलाई लाग्न सक्छ। बाँझोपन, साल अड्कने, भण्डार फर्कने, बाच्छाबाच्छी अड्कने, गर्भ तुहिने जस्ता समस्याहरूले पनि सताउन सक्छ। यस्ता समस्याबाट बच्न वर्षमा एक पटक रोगविरुद्ध लड्ने भ्याक्सिनको प्रयोग गर्न कृषि विज्ञहरूको सुझाव दिने गरेको पाइन्छ।
यसो गर्दा पनि समस्या आएमा तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिने र चिकित्सकको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ। हाम्रो दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि गाई पालन गरेर नै मध्यम लगानीमा मनग्य आम्दानीका लागि गाई पालन व्यवसायको बारेमा राम्ररी जान्नुहोस् र व्यवसाय गरेर लाभ उठाउन सक्नु हुन्छ।
रुन्ती मरिक सुँगुरको खोरमा जीवन बिताउन बाध्य
पर्वतमा ठूलो असिना, करोडौंको बालीनाली क्षति
कृषि क्रान्तिमा घनश्याम भुसालका पाँच शुत्र
सुदूरपश्चिममा देशकै ठूलाे कृषि प्रशाेधन केन्द्र !